Xukumadda Asad oo si Weyn loo Gilgilay
Qaraxan dhacay arbacadii shalay waxuu noqday dharbaaxadii ugu xumeyd ee abid ku dhacda taliska Madaxweyne Bashaar Al-sad, iyadoo faniinka dhiiga dalkaasi Suuriya ka qubanayay uu gaaray , ragga Mr. Asad aadka ugu dhow dhowaa ama ku xeernaa.
Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay dhismaha amniga Qaranka Suuriya ee magaalada Dimishiq, sida uu sheegay telefishinka dowladda Suuriya.
Sadex sarkaal oo sar sare ayaa ku dhimatay qaraxa tira kalena waa lagu dhaawacay.
Weerarka ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo ugu yaraan 102 qof ay ku dhinteen rabshado meela badan oo dalkaasi ah ka dhacay oo ay ku jirtay caasimadda dalkaasi ee Dimishiq.
Ugu yaraan 34 qof oo dadkaasi ka mid ah ayaa ku dhintay Dimishiq 11 kalena waxey ku dhinteen nawaaxiga magaalada, sida ay sheegeen saraakiil u hadashay mucaaradka dalka Suuriya, iyo qolyaha u dhaq dhaqaaqa xuquuqda aadanaha.
Saraakiisha Qaraxii shalay ku dhimatay ayaa waxey kala ahaayeen wasiirka difaaca Dawood Rajiha;
Daud waxa uu ahaa sarkaalkii ugu sareeyay ee dowladda Suuriya ka tirsan ee la dilay intii ay socotay colaadda wadankaasi ka taagan
Daud oo 65 jir ahaa, horeyna u ahaa general ka tirsan ciidamada waxa kaloo uu ahaa sarkaalkii ugu sareeyay ee hesta diinta Christianka ee ku jiray dowladda Madaxweyne Asad.
Waxaa jagadaasi loo magacaabay bishii August ee sanadkii la soo dhaafay, waxa uu ka mid ahaa dadka ugu cad cad qowmiyadaha laga tirada badanyahay dalkaasi, oo ay u adeegsato dowladda Madaxweyne Asad, tusaalaha kala duwnaanshaha milatariga iyo laamaha amaanka oo inta badan ay gacanta ku hayaan Calaawiyiinta Suuriya.
Waxaa kaloo weerarka lagu dilay ku xigeenka wasiirka difaaca Assef Shawkat – oo seedi u ahaa madaxweyne Asad, qabayna walaashiis ka weyn, gabadha la yirahdo Bushra.
Waxa uu miltariga dalkaasi ka ahaa major general iyo ku xigeenka wasiirka difaaca, waxaa kaloo uu ahaa ku xigeenka taliyaha guud ee ciidamada amaanka dalkaasi, waxuuna qeyb ka ahaa dadka ku xeeran oo aadka ugu dhow dhow madaxweyne Asad.
Waxaa kaloo saraakiisha la dilay ku jiray Xasan Turkmani, oo horey u ahaa wasiirkii difaaca ee dalkaasi.
Waxa uu masuul ka ahaa howlagalada la tacaalidda qul qulatooyinka. Waxa uu ka soo jeedaa qowmiyada muslimiinta suniga ah ee dalkaasi , waana ninka kaliya ee ka bedelan ee ku jira – waaxda sirdoonka miltariga Suuriya, oo ay gacanta ku hayaan bahda calaawiyiinta ee Madaxweyne Asad.
Weerarkaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay wasiirka arimaha gudaha Mohammed Shaar iyo Maj. Gen. Hisham Ikhtiar, oo madax ka ah waaxda amaanka Qaranka, telefishinka dalkaasi ayaa sheegay in labaduba ay xaaladooda wanaagsantahay.
Hase yeeshee qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka ayaa sheegay in Wasiirka Arimaha gudaha uu dhaawicii weerarka ka soo gaaray uu ku dhintay.
Inkastoo madaxweynaha Suuriya uusan wax war ah ka soo saarin weerarka, hadana Tvga Suuriya ayaa sheegay in wareegto madaxweynaha ka soo baxday lagu magacaabay saacado ka dib markii uu weerarka dhacay Gen. Fahad Jassem al-Freij, inuu noqdo wasiirka cusub ee difaaca ee Suuriya. Freij waxa uu horey u ahaa taliyaga guud ee ciidamada qalabka sida.
Qoryska uu ka soo jeedo Madaxweyne Bashaar Al-asad waxa ay xukunka dalkaasi hayeen afartankii sanadood ee la soo dhaafay, iyagoo abuuray talis xooggan oo aan la dhex gali karin.
Hase yeeshee weerarkii dhacay arbacadi shalay ayaa noqonaya mid aan noociisa horey loogu arag dalkaasi oo loo geystay ragga madaxweynaha sida aadka ah ugu dhow dhowaa.
Telfishinaka dalkaasi ayaa ku sheegay qaraxa markii hore ismiidaamin, inkastoo markii dambe uu ku tilmaamay bam.
Taliyaha ciidamada mucaaradka Suuriya, Riad al-Asaad, ayaa sheegtay masuuliyadda Qaraxaasi, isagoo sheegay in xoogagiisa mucaaradka ay bam ku xireen qolkii ay masuuliyiinta ku shirayeen
Waxa uu intaasi ku daray in dhamaan afar dadkii fuliyaya weerarkaasi ay yihiin kuwo badqaba.
Ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalkaasi ayaa hareereeyay cusbitalka la yirahdo al-Shami Hospital, halkaasoo lagu daweeynayay qaar ka mid ah saraakiishii dhaawacantay.
Si kastaba ha ahaatee qaraxii shalay ayaa ahaa fariin cad oo ku socotay Xukumadda Suuriya taasoo aheyd in xukumadina aysan ku badbaadi Karin awood ciidan iyo qowmiyad gaar ah oo ay isku xeerto hadii shacabkeeda aysan raali ka wada aheyn.
Dhinaca kale waxa uu qalqal dhinaca amaanka ah iyo kala shaki gelinayaa milatariga dalkaasi iyo madaxda sar sare, waayo waxaa muuqata iney jiraan dad weli dowladda ku dhex jira oo doonaya iney dumiyaan iyagoo qeyb ka ah.